Ahoana ny fametrahana sy fikirakirana XAMPP amin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Nexcoyotl | | fampiharana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Ity dia torolàlana vaovao momba ny fomba fametrahana sy fikirakirana XAMPP ao amin'ny GNU / Linux, miaraka amina tsikelikely.
1 Inona ny atao hoe XAMPP?
2 Ahoana ny fametrahana sy fikirakirana XAMPP?
2.1 Mametraka Xampp
2.2 Mametraka XAMPP
Inona ny atao hoe XAMPP?
XAMPP dia maimaimpoana tanteraka sy mora apetraka aparitaka Apache izay misy MariaDB, PHP, ary Perl. Ny fonosana fametrahana XAMPP dia natao ho mora apetraka sy hampiasaina. Maimaimpoana tanteraka ary mora ny mametraka aparitaka Apache misy MariaDB, PHP, ary Perl.
Ahoana ny fametrahana sy fikirakirana XAMPP?
1.- Sintomy ny XAMPP ho an'ny Linux https://www.apachefriends.org/es/index.html
2.- Amin'ny faran'ny fampidinana dia manana a archive.Run, izay tsy maintsy apetrakay amin'ireto fomba manaraka ireto:
Manokatra Terminal izahay miaraka amin'ny Fanaraha-maso + T, na avy amin'ny menio.
Midira ho faka:
Manohy manome alalana famonoana amin'ny .run izahay ary mametraka XAMPP
Manaiky ny zava-drehetra izahay ary miandry ny famaranana fametrahana.
3.- Manohy mandrindra ny XAMPP izahay
$ ln -s / opt / lampp / bin / mysql / usr / bin / $ izay MySQL $ type MySQL $ ls -lart / usr / bin / MySQL
Fametrahana ny lalàna com.ubuntu.pkexec.xampp.policy ho an'ny tontonana sary miaraka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny mpitantana dia hamokatra rakitra bash izay mandeha xampp-linux-x64-5.6.28-0-installer.run. Ho an'ity dia mandeha amin'ny làlana izahay / usr / share / polkit-1 / hetsika ary manatanteraka izahay:
$ mikasika com.ubuntu.pkexec.xampp.policy $ nano com.ubuntu.pkexec.xampp.policy
Ao anatin'ny fisie com.ubuntu.pkexec.xampp.policy mametaka ity kaody manaraka ity izahay:
Ilaina ny fanamarinana mba hampandehanana ny Panel Control XAMP xampp auth_admin auth_admin auth_admin /opt/lampp/manager-linux-x1.0.run marina
Mamorona ny script tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny tontonana sary XAMPP eny an-dalana / usr / bin / . Tsy maintsy mamorona ny script amin'ny anarany isika xampp-control-panel:
mikasika xampp-control-panel nano xampp-control-panel
Manangana .desktop handefasana ny manager manager XAMPP sary, alefaso amin'ireto lalana ireto baiko manaraka ireto / Usr / Share / fampiharana:
Aorian'ny fandefasana nano application.desktop ampidiro ity kaody manaraka ity
[Entry Desktop] Fanamarihana = Start / Stop XAMPP anarana = XAMPP Control Panel Exec = xampp-control-panel Icon = xampp Encoding = UTF-8 Terminal = diso Type = Fampiharana
Ankehitriny dia manana kisary izahay fa rehefa voatetika dia hanatanteraka ny pkexec, izay mangataka aminay fidirana hanomezana alalana fanatanterahana ny tontolon'ny sary XAMPP. Tokony ho toa izao:
Raha hampiasa mysql, raha nanao ny fikirakira teo aloha ianao dia tsy mila mankany amin'ny lahatahiry intsony / opt / lampp / bin / MySQL -u faka -p raha hiditra izao dia mila manokatra terminal fotsiny ianao ary mihazakazaka mysql -u root -p.
Ankehitriny isika dia afaka mitantana an-tsary ny XAMPP ary miditra amin'ny mysql ara-dalàna raha tsy mankany amin'ny lahatahiry / opt / lampp / bin.
Ity no torolàlana rehetra, manantena aho fa tianao izany ary aza adino ny mamela ny hevitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fametrahana sy fikirakirana XAMPP amin'ny GNU / Linux
Ireo no lahatsoratra ankasitrahana indrindra, ho an'ny atiny feno sy antsipiriany momba ny atiny. Nanampy ireo mpiara-miasa aminy izay tia Windows hametraka kinova amin'ny rindrambaiko XAMPP izy. Tsy fantatro ny fisian'ny installer ho an'ny Linux, zatra mametraka sy manamboatra LAMP amin'ny tanana. Resy lahatra aho fa hanampy be dia be ho an'ireo maniry hanana mpizara miaraka amin'ireto endri-javatra ireto, ary handresy lahatra ireo mpandahatra fandaharana sy mpitantana maro izay aleony hametraka azy amin'ny Windows, hanao izany amin'ny mpizara miaraka amin'ny Linux. Misaotra Nexcoyotl tamin'ny lahatsoratra tsara toy izany!
Nexcoyotl dia hoy izy:
Misaotra betsaka, Federico, nankasitraka ny hevitrao, antenaiko fa nahasoa ity boky kely sy tsotra ity. Ity no voalohany antenaiko hanao bebe kokoa.
Mamaly an'i Nexcoyotl
Yerko dia hoy izy:
Torolàlana tena tsara
Fa manana fanontaniana aho, maninona ianao no mikasika? Azoko tsara fa ny mamorona ilay rakitra banga, saingy amin'ny nano fotsiny dia azonao atao ny mamorona sy manitsy ny rakitra ...
Valio i Yerko
mikasika dia baiko ampiasaina hanavaozana ny daty fidirana sy fanovana rakitra iray na maromaro, amin'ny daty ankehitriny.
hikasika [OPTINO]… FILE…
Raha tsy misy ny tohan-kevitra FILE na anaran'ny fisie dia famoronana rakitra foana mitovy anarana amin'ny hoe FILE no foronina.
Mivantana kokoa - ary tena mahazatra - ity fomba ity hamoronana rakitra tsy misy, toy izay amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratra Nano
Run lehilahy mikasika For more information.
Salama yerko mialoha misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra, ny antony ampiasako ny mikasika dia satria amiko dia fanao hehe. Ary raha, hoy ny namana Federico, ny asany dia mihoatra ny famoronana rakitra. Raha te hahalala bebe kokoa ianao, mandefasa $ man touch, arahaba namana.
Saingy, aorian'ny fikasanao dia manova ny rakitra ianao, noho izany dia dingana fanampiny amin'ny zavatra ataonao.
Fantatro izay ataon'ilay fikasihan-tanana, tiako ho fantatra fotsiny ny antony anaovanao azy: P, satria niaraka tamin'ny nano dia nihoatra ny ampy 😉
Antontan-taratasy tena tsara, asa tsara.
Inona no ampiasainao hanamboarana ny mailaka, tena tiako ny fanaingoana azy.
Salama namana, misaotra anao nijanona ary naneho hevitra 😀, mampiasa powerline shell aho dia tetikasa loharano misokatra afaka ahitanao azy ao amin'ny github. Mora ny manamboatra ahy mampiasa akorandriaka bash sy powerline na dia azonao atao aza ny manefy azy ho an'ny zsh.
Fampianarana tena tsara. Misarika ny saiko ny config an'ny terminal, azonao zaraina ve ny config?
Salama, Koratsuki, zahao ity fampianarana ataoko ity, manantena aho fa ilaina ny manamboatra ny mailaka. https://blog.desdelinux.net/configurar-bash-prompt-powerline-shell-master/
Tena tsara ny fandraisanao anjara Rahalahy, mampalahelo fa tsy dia hitako loatra ity famoahana ity, herinandro vitsivitsy lasa izay dia navelan'izy ireo tamiko ny mametraka tontolo LAMP amin'ny solosainako, fa raha ny fahitako azy dia mora kokoa ny mametraka XAMPP. Na izany na tsy izany misaotra tamin'ny fandraisana anjara, arahaba.
daz08 dia hoy izy:
Tsara, voazava tsara ary amin'ny fomba tsotra.
Valio i daz08
MORKE dia hoy izy:
Nandeha tsara ny zava-drehetra.
Valiny amin'i MORKE
Salama, izay rehetra hazavaina amin'ny sary, azavaina amin'ny soratra ihany koa? Izany hoe, natao sary fotsiny ny sary? Na misy dingana tsy maintsy ataonao izay amin'ny sary. Manontany aho satria jamba, ary mbola tsy tena mahay ny linux, ka tsy te hisavoritaka haha. Etsy ankilany, manana ubuntu mate 18 aho. Azo ampiharina ve ity fampianarana ity? Avy sahady dia misaotra betsaka. Mihobia!
Leon S dia hoy izy:
Fitaovana tena tsara misy atiny misy sary, manamora ny fitarihana ny hafa izany
Valiny tamin'i Leon S
Ignacio7 dia hoy izy:
- ny lafiny iray dia aseho indroa
- iray amin'ny làlana
- ary iray hafa amin'ny làlana:
/ Usr / Share / fampiharana
- Heveriko fa amin'ity làlana faharoa ity dia tokony ho xampp-control-panel.desktop.
- Etsy ankilany, raha hanao ny ankamaroan'ny dingana, dia tsy nahazo alalana aho, ka nifarana tamin'ny alalàn'ny «sudo«, mba hahafahako mamorona azy ireo.
- Fa amin'ny farany rehefa miditra amin'ny kisary aho dia manome hafatra diso aho:
Ny baiko "xampp-control-panel" dia tsy afaka novonoina.
Tsy nahomby tamin'ny fizotran'ny zaza "xampp-control-panel" (Nolavina ny fahazoan-dàlana)
Valiny ho an'i Ignacio7
- Efa nataoko miasa io ary napetrako ao amin'ny fisie / usr / bin / xampp-control-panel-panel ny alàlana famonoana.
Harold barboza dia hoy izy:
Misaotra fa ity no tsy hitako noho ilay olana nolavina fahazoan-dàlana.
Valiny tamin'i Harold Barboza
2020 ity lahatsoratra ity dia mbola mandeha tsara!
Nicksoad dia hoy izy:
Misaotra, niasa ho ahy izy io, na dia tsy hitako aza ny kisary xampp fa boaty fotsy saingy tsy maninona izany, manana olana fotsiny aho fa rehefa mampiasa kaody editor toa ny fahamboniana dia mandà ahy ny fahazoan-dàlana hamorona rakitra amin'ny tetik'asa htdocs. Nahavita nanao ambony aho tamin'ny fanomezana alalana hahafahako mamaky sy manitsy ireo rakitra fa tsy afaka mamorona rakitra vaovao.
Valiny amin'i Nicksoad
juconta dia hoy izy:
Misaotra Nexcoyotl iray tapitrisa ho an'ny lahatsoratra !!!, ary ho an'izay rehetra manao ny blog.desdelinux.net toerana iray ahitanao ny mombamomba izay ilainay !!.
Misaotra misaotra !!
Mamaly an'i juconta
Fanazavana tena tsara
Mampiasa linux mint aho ary afaka mampiasa iray izay nohazavaina tamin'ny fidirana satria vitako ny dingana ary tsy miseho amin'ny faritra misy sary izany.
Mialoha dia misaotra betsaka